Saddex maalin kadib Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay Doorashadii Cadaado ka dhacday |
Saddex maalin kadib Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay Doorashadii Cadaado ka dhacday
Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa saddex maalin kadib wuxuu soo dhaweeyay doorashadii lagu doortay madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed, doorashadaaso oo 04 Bishan ka dhacday Magaalada Cadaado.
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudana Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa u hambalyeeyay baarlamanka maamulka Galmudug, sida wanaagsan ee uu ugu guuleystey qabashada doorashada madaxtinimada ee Maamulka Ku Meel Gaarka ee Galmudug.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale hambalyeeyay Madaxweynaha cusub ee la doortey Mudane Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo Madaxweyne ku Xigeenka, Mudane Maxamed Xaashi Cabdi, isagoo si gaar ah u soo dhoweeyay qaabka daah-furnaanta iyo sida nabdoon ee ay doorashadu ku qabsoontey.
“Soomaaliya waxay ku tallaabsatey horumar la taaban karo oo ku wajahan baahinta xukunka dowladnimada iyo dhaqangelinta habka federaalka. Doorashada toddobaadkan ee maamulka ku meel gaarka ah ee Galmudug waa tallaabo kale oo horey loogu qaadey dhinaca dhameystirka iyo hirgelinta nidaamka federaalka ee Soomaaliya. Aniga iyo mas’uuliyiinta kale ee Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa inaga go’an inaan la shaqeyno Madaxweyne Cabdikariim Guuleed iyo maamulkiisa, si loo dhiso xiriir adag oo lagu xaqiijinayo in shacabka Galmudug iyo gobollada kale ee dalka ay si wadajir ah u hiigsadaan nabad iyo barwaaqo,” ayuu yiri Madaxweynaha.